Ebe ịzụta akwa dị ọcha stanozolol ntụ ntụ | Azu na-emepụta steroid
/blog/Stanozolol/Ebee ịzụta akwa dị ọcha stanozolol ntụ ntụ?
Ihe na 10 / 28 / 2017 by Dr. Patrick Young dere na Stanozolol.
Kedu ihe bụ stanozolol?
Stanozolol, nke a na - akpọkwa Winstrol, bụ otu n'ime ọgwụ ndị a maara nke ọma, e mere iji na - emeso anaemia na maka ogwu. N'oge a, a na-ejikarị ya eme egwuregwu, karịsịa na bodybuilding. Winstrol nwere ike iji ndị ikom na ndị inyom n'enweghị nsogbu. Nzube ya bụ abụba ọkụ .Ndị iche iche nke stanzolol na ahịa na - abụkarị injectable stanozolol, ụbụrụ stanozolol: stanozolol 50mg, stanozolol 100mg, mmiri stanozolol, stanozolol mbadamba, stanozolol raw ntụ ntụ.
Kedu ihe bụ stanozolol raw ntụ ntụ?
Stanozolol ntụ ntụ bụ ihe onwunwe nke Stanozolol, bụ ụdị ntụcha ọcha, CAS: 434-07-1, Ụdị Mkpụrụkpụ C21H32O3, Mpokara Weight: 332.48, Melt Point: 172-180 ° C, Stanozolol na-echekwa n'ime ụlọ.
Ụzọ abụọ nke ịzụta stanozolol raw ntụ ntụ: N'ụlọ ahịa ma ọ bụ n'ịntanetị?
N'ozuzu, ndị mmadụ nwere ike ịzụta steroid ha chọrọ na ụlọ ahịa mpaghara, ma dị ka Intaneti mepụtara ngwa ngwa, ahịa ịntanetị na-aghọ ụzọ dị elu maka ịhọrọ. N'oge a, ọtụtụ ndị mmadụ na-achọ ịzụta sterodis online, karịsịa ịzụta uzuzu, nnukwu ntụ ntụ stanozolol, zụrụ stanozolol raw ntụ ntụ, ma e jiri ya tụnyere ụlọ ahịa ọdịnala, ịzụ ahịa ịzụ ahịa online n'ịzụ ahịa stanozolol nwere uru ndị ọzọ, ntanetị ịzụta ego bụ ihe ọzọ, jiri nwayọọ tụnyere, mgbasa ozi na ụlọ ahịa, ọnụahịa stanozolol dị ọnụ ala karị, ọ dịkwa mfe.
Ebee ka zụrụ stanozolol raw ntụ ntụ online?
Anyị na-adịkarị mfe ịhụ ụdị ikpe ahụ, nke ahụ bụ mgbe ị na-agbanye stanozolol online, ọ bụ na-abụkarị ngwongwo ndị dị adị, ma ọ bụ ịdị ọcha dị ala karịa ọkọlọtọ, ya mere, otu esi họrọ oke akwa stanozolol, na-ahọrọ a pụrụ ịdabere na steroids soplaya bụ nnọọ dị mkpa.
Ọ bụrụ na ịnweworị onwe gị ndị na-ebu ọla na ụzụ, mgbe ahụ ọ dị mma .Ọ bụrụ na ọ bụghị, ebe a ga-abịa ezigbo nhọrọ gị, AASraw. Karịsịa maka ndị na-ere ọgwụ na steroid, ndị chọrọ ịchọta ebe a pụrụ ịdabere na ya, nke nwere ike hụ na ha dị elu ma dị ukwuu, dị mma maka mmepe azụmahịa, AASraw mere ka o kwe omume.
Gịnị bụ Ụlọ ọrụ AASraw?
Ejighariri ihe omumu ihe omuma ihe omimi nke Shanghai nke biotechnology nke 2008, nke 5 Chinese Ph ji megharia na 99, bu ndi a na-achota na Chemical Engineering na Mahadum Tulsa, Oklahoma, USA.Onye anyi nyere 90% puirty steroid raw powder enwe ezigbo ego ma mara mma ahịa, nnyefe ngwa ngwa na ịkwụ ụgwọ dị mma .Main ngwaahịa: anabolic steroid raw raw, bodybuilding, fitness, loss fat, hormones sex, SARMS, PCT drugs, HGH, homebrew, ugl.Such as Testosterone enanthate 100USD / XNUMXG , elu Clen HCL, sibutramine, ect.
Stanozolol- Top na-ere steroid maka bodybuilding !!!	Modafinil: Ebe ịzụta nnukwu Modafinil ntụ ntụ